पञ्चेबाजा सहित बेहुला बेहुलीको घर पुगे, बेहुलाले आँगनमा टेके लगत्तै बेहुलीको मृ, त्यु ! – Everest Pati
एजेन्सी । धुमधामका साथ विबाह गर्ने योजना बोकेर बेहुला जन्ति सहित बेहुलीको घरमा पुग्छन् । विबाह भएका कारण बेहुलीको घरमा पनि धुमधामका साथ गीत संगीत बजिरहेको थियो । आफन्त र परिवारका सदस्यहरुलाई भ्याई नभ्याई थियो । यत्तिकैमा दुलाहा व्याण्ड बाजासहित बेहुलीको घरमा पुगे । चौतर्फी खुशीको माहोल छाइरहेको थियो । क्षणभरमा नै माइतीघरमा रुवाबासी मच्चियो ।
घटना हो भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कन्नौज जिल्लाको। भारतीय मिडियाका अनुसार ठठिया थाना क्षेत्रको गाउँ भगतपुरवामा राजकिशोर बाथमको १९ वर्षीया छोरी विनिताको शुक्रवार बिहे हुनै लाग्दा उनको निधन भएपछि माइती र बेहुला पक्ष दुवै समस्यामा परे । खुशीको माहोलमा एक्कासी सन्नाटा छायो । बेहुली लिन पञ्चेबाजा सहित गएका बेहुला र उनको परिवारमा पनि रुवाबासी छायो ।
बेहुलीका बा आमा अचेत बने । प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार घटनास्थल पुगेर शवलाई पोष्ट मार्टमका लागि पठाएका छन् । पो ष्टमार्टम रिर्पोटपछि मात्रै घटनाका विषयमा थप बोल्न सकिने प्रहरी थाना प्रभारी विजयबहादुर वर्मा र उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमारले बताए ।
बिहेको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई बिना मेकअप देखेपछि पतिले दिए उ’जुरि !
नवराज विकलाई सरकारले गर्यो यस्तो पुरस्कार दिने घोषणा
काठमाडौंमा आजबाट टेम्पो पनि चल्न थाल्यो ..
सुशान्तको प्रेमिका रियाले बलिउडमा नै तरंग आउँने गरी यस्तो लेखिन्
नेपालमा आज ३४ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्के
साउन १ गते सार्वजनिक विदा
अयोध्याबाट वि’वादित सन्त परमहंसको उद्घोष, एक महिना भित्र ओलीलाई सत्ताच्यूत…
०७७ आषाढ ३१ गते बुधबार ई. स. २०२० जुलाई १५ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको…
अयोध्याबाट वि’वादित सन्त परमहंसको उद्घोष, एक महिना भित्र ओलीलाई…